Shacab Cadaysan OoMagaalada Ceelwaaq Baangado Qudha Kaga Jaray Sadex Qof Oo Kiiniyaan Ah Kadib Markii Ay Ciidamada Kenya Si Badheedh Ah U Toogteen Macalin Quraan Iyo Labo Arday
14/09/2018(BNN) Ciidamada Kenya ayaa lagu soo waramayaa in deegaanka dabacity ee hoostagga Ceelwaaq Kenya ay ku dileen Macalin Dugsi Qur’aan iyo laba arday.
Dadka deegaanka ayaa sheegay Macalinka oo ku sugan goobtiisa Dugsiga ay u yimaadeen Ciidamo ka tirsan Militariga Kenya, kadibna ay jirdileen.
Intaasi kadib Ciidamada Kenya ayaa la sheegay in rasaas ay la dhaceen Macalinka Dugsiga iyo labada arday.
Macalimka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Saadaam Macalim Aways, halka labada wiil ee lala dilay oo walaallo ahaa lagu kala magacaabi jiray Cali Ibraahim Xasan iyo Siyaad Ibraahim Xasan.
Dadka deegaanka ayaa si wayn uga argagaxay falkaan dilka ah ee dhacay, waxaana la sheegay maydadka Macalinka iyo labadii arday in loo soo qaaday dhanka Ceelwaaq Somaliya.
Dadka ka carooday falkaasi ayaa maanta banaanbax balaaran ka sameeyay Ceel waaq, waxeyna taasi keentay in Ciidanka Kenyanka ay rasaas ku furaan dadkii banaanbaxa dhigayay, Rasaata waxaa dhaawac daran uu ka soo gaaray wiil la sheegay inuu dhalay qof kamid ah dadka ugu hantida badan Ceel waaq.
Waxaa dhaawiciisa loo qaaday dhanka Ceel waaq Kenya, iyadoo uu ku geeiryooday gdaha Isbitaalka, dadkii careysnaa oo isbitaalka hor dhoobnaa ayaa durbadiiba baangado la dhacay dhaqtarkii dabiibayay wiilka dhaawaca u dhintay, iyadoo uu dhaqtarka Kneyan ihi isla goobta ku geeiryooday.
Sidoo kale shacabkii carada xoogan qabay ayaa baangado ku dilay laba qof oo Kenyan ah oo ka shaqeynayay dhagax qodista, waxaana halkaasi ku dhintay qof haweeney ah iyo Nin rag ah.
Tirada kenyanka banagadaha lagu dilay maanta waa Saddex, halka tirada Somalida ee Ciidamada Kenya ay dileenna ay tahay 4 Qof.
Xaalada magaalada, ayaa la soo sheegayaa iney tahay mid dagan, waloow dadka ay qabaan cabsi la xidhiidha in Kenyanka caawa inta soo guureeyan ay dhibaato Shacabka u geystaan.
C/Casiis Xaaji Csimaan oo kamid ah ehelada Saddexda qof ee kenta toogteen, ayaa inoo sheegay ineysan jirin wax cadaalad ah oo ay ka helaan dowladda Kenya marka askartooda ay tacadiyada shacabka u geysato
More in this category: « Ciidamada Dalka Turkiga Oo Ku Sii Qulqulaya Magaalada Idlib Ee Dalka Suuriya Xili Ay Ciidamada Suuriyana Isku Diyaarinayaan Duulaan Xoogan Oo Ay Ku Soo Qaadayaan Magaaladaasi DAAWO: Madaxwayne Ku Xigeenka Maamulka Khaatumo Oo Ka Hadlay Colaada Deegaanada Koonfurta G/Sool Dhaliilo Culusna U Jiidiyay Xukuumada Muuse Biixi »